Izingubo ezifashisayo, ekwindla-ebusika 2015-2016 - isithombe. Ukugqoka abesifazane besifazane ekwindla nasebusika 2015-2016, isithombe
Siyaqhubeka nomhlahlandlela wethu wokuthenga imfashini yonyaka ekwindla-ebusika 2015-2016. Namuhla ngesibhamu. Imvula yase-autumn nobusika obusika akusona isizathu sokukhohlwa ngabo. Ikakhulukazi kuwe, isayithi le-stylist lenze ukukhethwa kwemfashini kusuka kwizigaba ezahlukene zamanani.
Izimbali zasebusika - ZARA, 3 999 р.
Amabhande esikhumba aphethwe ngendlela engavamile, ngesimo sezinkathi ezithile zezinkathi, ngeke alahlekelwe ukubaluleka kwawo kulokhu kanye nobusika. AmaMidi abuyele esimweni - futhi kulula kakhulu ngenkathi ebandayo. Flower ukuphrinta "ebusika" shades emaphethelweni ezigeleza of the dress, ngokuqinisekile, kuyokusiza inkumbulo enhle ehlobo.
Ububele nokuthandana - LOVE REPUBLIC, 4 999 р.
Uma ehlobo usugcwalise ikhabethe lakho ngesigqoko ngesitayela se-Baby Doll, ungasheshi ukuyibeka ebhokisini elingemuva: lokhu kuwela kuyobe kuyimfashini. Isikhwama esiphezulu, i-bello-skirt, i-openwork efaka - yonke le mininingwane ikhona ekuqoqweni kwenkathi ezayo. Kubusika kungcono ukukhetha umthunzi omnyama osebenzayo (isibonelo, omnyama) kanye nendwangu enomsoco.
I-shawl nge-fringe - UTERQÜE, 11 990 р.
Umcengezi nomkhonto ozwakalayo kulesi sigqoko kufana ne-shawl enkulu yeboya. Noma kunjalo, lokhu akusona kuphela ukuphikisa - konke ukuhlobisa okufanayo kusitshela ezikhathini ze-jazz nomthetho owomile eMelika. Ubude obuhle be-fringe kanye nokusika okuqondayo nombala kwenza lo mgqoko upheleleke. Ungayigqoka kokubili umhlangano webhizinisi nosuku lothando.
I-autumn ekhishwe - TOPSHOP, £ 38
Ukuphrinta kweJomethri kuya ezikhundleni zokuqala kumqoqo womklamo ekwindla-ebusika 2015-2016. Ikakhulukazi udumo - i-band ne-cage. Lesi siqeshana eside sizobukeka sihle kakhulu emantombazaneni amancane kakhulu. Futhi ukubala okugqamile kwalesi sigqoko ngeke kukuvumele ukuba ube nesithukuthezi esimisweni esibucayi obukhulu.
Isikhwama seTweed nesiRussia - Oodji, 1499 р.
Abaphathi bezeMfashini bakholelwa ukuthi ingubo eboshiwe yinto engaphandle kwesikhathi, ngakho-ke iphinda ibhekisele kulokhu okubonakalayo njengendlela yokuziphatha. Ukugqoka i-Oodji kuyobazisa labo abangenakulahla ama-shades abonakalayo nezimbali ezivundile ngisho nangenkathi ebandayo. Ubukhulu be-tweed "isihlahla sikaKhisimusi" buhlukumeza umklamo ojabulisayo wekhanda likaPavlopasadian
I-Achromatika yehhovisi hhayi nje kuphela - UKUQHUBA KWENKQUBO, £ 95
Umphumela we-multilayer wenza lokhu kungagcini nje kuphela, kepha futhi ku-airy. Kuphela lokhu kulula kunakho ebusika. I-gamma emnyama neyomhlophe iyisisekelo sombala esihambisanayo futhi esifanele ngaso sonke isikhathi, kungakhathaliseki ukuthi yisikhathi, imfashini nobani besifazane. Kodwa emibonisweni yemifashini yenkathi yasekwindla-ebusika 2015-2016 achromatics yahlangatshezwa ikakhulukazi.
Gqoka kusuka esifubeni sikagogo - MANGO, 3 999 р.
Ukugqoka ngesitayela se-patchwork kuyisikhathi sonyaka ozayo wekwindla nobusika. Kodwa-ke, ukubaluleka kwalesi sigqoko akukhona nje "ezinhlokweni eziningi", kodwa futhi nemikhono emithathu. Lona ubude abaningi abaklami abakhethele amaqoqo abo yakamuva.
I-classic efudumele - RIVER ISLAND, £ 40
Unogogo onakekelayo uthanda ukufudumala abazukulu babo ngezinto ezakhiwe. Eqhwa lezi zinto ziba usizo kakhulu. Uma ungenabo ugogo, akunandaba. Abaqambi RIVER ISLSAND bathatha indima yabo.
Kusihlwa - i-Asos, 131,34 €
Ukuwa, ngezikhathi ezikhethekile, ukhethe ingubo phansi. Imodeli evela ku-Asos idonsela ukunakwa ngokuhlanganiswa okungelona okuncane kwemibala eluhlaza okwesibhakabhaka kanye ne-beige. I-Openwork embroidery inikeza ukuxulela kancane kuma-shawls aqoshiwe.
Izikhukhula eziyisikhombisa zemvelo zezulu sehlobo
I-Hollywood yokwenza: i-TOP-3 izitayela ezinhle ezivela ku-cinema
Ukuvimbela ukukhubazeka kwe-dentoalveolar ezinganeni
Izimfihlo zobuhle ezivela emhlabeni jikelele
AmaSms noSuku Lomama ku-prose nevesi. I-SMS emfushane iyakwazisa umama, umngane, umkhwekazi, indodakazi
Yini ekulindelwe u-Aries ngo-2014
Imikhuba emihle kubantu abafundele
I-Cuba lizwe elinomhlaba ophezulu
Izinja ezimnandi nezincane
Kulula kanjani ukususa izindlebe ezinqulwini: izivivinyo ze-TOP 5
Umfazi ususa kanjani inkosikazi: Isiqondiso Esiwusizo